၁၆ ပေရှည်သည့် စပါးအုံးမြွေကြီးတစ်ကောင် အပါအဝင် မြွေ ၁၆ ကောင်နှင့် အတူနေသည့် မိန်းကလေး – Shwe Innlay
HomeLifestyle၁၆ ပေရှည်သည့် စပါးအုံးမြွေကြီးတစ်ကောင် အပါအဝင် မြွေ ၁၆ ကောင်နှင့် အတူနေသည့် မိန်းကလေး
၁၆ ပေရှည်သည့် စပါးအုံးမြွေကြီးတစ်ကောင် အပါအဝင် မြွေ ၁၆ ကောင်နှင့် အတူနေသည့် မိန်းကလေး
*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 21: Zee with her two largest snakes in the hallway of her flat on May 21, 2018 in London, England. An animal lover has turned her small London flat intoasecluded paradise for her collection of snakes, includinga16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to beaveterinary nurse, first sawasnake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living inamini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax,aboa constrictor, royal python andablood python. PHOTOGRAPH BY Bahareh Hosseini / Barcroft Images
ဇီးဟု အမည်ရသော မိန်းကလေးသည် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ကပင် အိမ်မွေးတိရ စ္ဆာန်ဆိုင်တစ်ခု၌ မြွေတစ်ကောင်ကို တွေ့ခဲ့ပြီး ဝယ်ယူကာ နေအိမ်သို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
ယခုအခါ တိရ စ္ဆာန်သူနာပြုတစ်ဦးအဖြစ် သင်တန်းတက်ထားပြီးဖြစ်ကာ အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဇီး၏ အိပ်ခန်းအတွင်း မြွေပေါင်း ၁၆ ကောင် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီ ဖြစ်သည်။
မွေးမြူထားသည့် မြွေများတွင် အမြတ်နိုးဆုံးမှာ ၁၆ ပေရှည်လျားသည့် စပါးအုံးမြွေကြီးနှင့် အဝါရောင်စပါးကြီးမြွေတို့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မြွေကိုက်ခံခဲ့ရသော်လည်း ဇင်းက သူချစ်သောတိရ စ္ဆာန်ကလေးများသည် သူ့အား ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက် နာကျင်အောင် ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။
“ကျွန်မ ရက်သတ္တပတ်တိုင်းနီးပါး အကိုက်ခံရပါတယ်” ဟု ဇီးက ပြောကြားသည်။
မြွေကိုက်နေပြီဆိုလျှင် ထွက်သွားစေလိုပါက အရက်ကို အသုံးချခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဦးခေါင်းများကို ရေအောက်သို့ နှစ်ထားရကြောင်း ဇီးက ဆိုသည်။
“မြွေက အကောင်သေးတယ်ဆိုရင် ခဏလောက်ပဲ စောင့်နေပါ။ ခဏနေရင် မကိုင်တော့ဘဲ သူ့ဟာသူ ထွက်သွားပါတယ်။ မြွေတွေဟာ ရှင်တို့ကို သတ်မယ့်သတ္တဝါတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သိပ်ကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မအချစ်ဆုံး အသည်းကျော်မလေးကတော့ စကားလက်လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ စပါးအုံးမြွေမလေးပါ။ သူက ကျွန်မရဲ့  ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျွန်မရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုပါ။ သူ့ကို ကိုင်တွယ်ဖို့က ယောက်ျားကြီး ၂ ယောက်လောက် လုပ်ရမယ့် အလုပ်မျိုးပါ။ ဒါကို ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ ချီမရတာ တကယ့်ရုန်းကန်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ” ဟု ဇီးက ပြောကြားသည်။
ဇီးက အကောင်ကြီးသော မြွေများကို စင်္ကြန်လမ်းတွင် မကြာခဏလွှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ စင်္ကြန်တွင်ဆိုလျှင် မြွေအကောင်ကြီးများမှာ ၎င်းတို့နှစ်သက်သလို လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ကြသည်။
မြွေကြီးများသည် နံရံများပေါ်နှင့် ကြမ်းခင်းများအောက်သို့ ဝင်သွားလေ့ရှိရာ ၎င်းတို့ကို ပြန်ခေါ်၊ ပြန်ထုတ်ရန် မီးသတ်ဌာနကို အကူအညီတောင်းရခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။
ဇီး၏ စပါးအုံးမြွေမှာ တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်အစာကျွေးရပြီး ၃ ကီလိုဂရမ်မှ ၆ ကီလိုဂရမ်အကြားရှိသည့် ယုန်အကောင်ကြီးများ ကျွေးရသည်။
အကောင်ငယ်များမှာမူ တစ်ကြိမ်ကျွေးလျှင် ရှဉ့် (သို့မဟုတ်) ကြက်ပေါက်တစ်ကောင်ကျွေးလျှင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျွန်မအမြင်မှာတော့ သူတို့ဟာ အရမ်းအရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ ကျွန်မနှလုံးသားပါ။ သူတို့ဟာ အရမ်းကို သိမ်မွေ့ကြတယ်။ ကျွန်မကို ရန်လိုစိတ်နဲ့ ကိုက်တာမျိုး ဘယ်တော့မှ လုပ်လိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကျွန်မကို နှာမှုတ်တာတွေ လုပ်ချင်လုပ်မယ်၊ ဘုတ်ခနဲရိုက်ပုတ်တာမျိုးလုပ်ချင်လုပ်မယ်၊ ဒါတွေက သူတို့ဟာသူတို့ နေချင်တယ်လို့ အသိပေးတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့လုပ်တတ်တဲ့ အဆိုးဆုံးအရာပါ။ ဒါကို ကျွန်မက လုံးဝစိတ်မဆိုးပါဘူး” ဟု ဇီးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လန်ဒန်တွင်ပင့်ကူမည်းကြီးများ ပေါက်ဖွားပျံ့နှံ့နေသောကြောင့် စာသင်ကျောင်း ၈ ခု ပိတ်ထားရ
ဂျာမနီတွင် လူတစ်ဦးအား နောက်ယောင်ခံလိုက်သည့်ရှဉ့်တစ်ကောင်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီး
သရဲ အကောင် ၂၀ နှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ကိုယ်ဝန်ရနေပြီဖြစ်သော အမျိုးသမီး
လိင်စိတ်ကြွစေတဲ့ ဖက်ရှင်အဖြစ်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ CARMAR Ripped Jeans ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသစ်
ဆရာ၏ဇနီးအား အဓမ္မကျင့်ရန် ကြံစည်သည့် တပည့်၏ လိင်တံကို ဆရာက သစ်သီးလှီးဓားဖြင့် လှီးဖြတ်
ရာသီလာနေတဲ့မိန်းကလေးကို အရှက်မကွဲအောင် ဥာဏ်ရှိရှိကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားကောင်လေး